प्रश्न १ वेबसाईट र युट्युब हरुमा कुन्डलिनी योग विषयमा प्रशस्त सामग्री हरु उप्लब्ध छन् । त्यहीबाट सिकेर कुन्डलिनी जगाउन सकिदैंन र ?
कुन्डलिनी शक्तिको जागरण र व्यवस्थापन कुनै उपयुक्त गुरुको देख रेखमा मात्र हुनु पर्दछ । आफैले प्रयास गर्दा कुन्डलिनी जागरण न हुनसक्छ र जागरण हुनपुगे पनि त्यो कुनै न कुनै चक्रमा अड्किने सम्भावना उच्च हुन्छ जसको फलस्वरुप विभिन्न प्रकारको शारिरिक तथा मानसिक क्लेश उत्पन्न हुन्छ । अत: यस्तो प्रयास कदापी गर्नु हुन्न ।
प्रश्न २ सरलिकृत कुन्डलिनी योग सिक्ने क्रममा कुन्डलिनी शक्ती अड्केर बिरामी हुन पुगेको छु । सन्चो पार्न सकिन्छ ?
कुन्डलिनी शक्तिको उचित व्यवस्थापन गरेर निको पार्न सकिन्छ । यसको लागी सरलिकृत कुन्डलिनी योग नेपालको कार्यालय मा सम्पर्क राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रश्न ३ सरलिकृत कुन्डलिनी योग को अभ्यास गर्ने क्रममा कहिले काँही अनुकुल न परेर ध्यान गर्न सकिएन भने के हुन्छ ? फेरी कुन्डलिनी जागृत गराउनु पर्छ ?
कहिले काँही अनुकुल न परेर ध्यान गर्न सकिएन भने केहि चिन्ता लिनु पर्दैन । अनुकुल परेको बखत देखी फेरी शुरु गर्दा हुन्छ । एक पल्ट कुन्डल्लिनी जागृत भैसकेपछी फेरी फेरी कुन्डलिनी जागृत गराइ राख्नु पर्दैन ।
प्रश्न ४ सरलिकृत कुन्डलिनी योग सिक्न को लागी के गर्नु पर्छ ?
यो योग सिक्नको लागी उपयुक्त दिक्षा लिनु पर्छ । यसको लागी स.कु.यो.को वेबसाइट (http://skynepal.org/registration/) मा रहेको निवेदन फारम भरेर ई-मेल अथवा हुलाक मार्फत अथवा व्यक्तिगत रुपमा स.कु.यो.को कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।
प्रश्न ५ सरलिकृत कुन्डलिनी योगको बारेमा विस्तारपुर्वक जानकारी कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
स.कु.यो.को बारेमा विस्तार जानकारी यसको वेबसाइट (http://skynepal.org.np) बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । स.कु.यो. नेपाल ले समय समयमा प्रदान गर्ने तालिम/सेमिनारमा सहभागी भएर पनि यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न ६ कुन्डलिनी योगको अभ्यास घरमा बसेर गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
शान्त वातावरण रहेको घरको कुनै कुना व कुनै पनि ठाउँमा स.कु.यो.को अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न ७ सरलिकृत कुन्डलिनी योग सिक्नको लागी कती समय लाग्छ ? यसको अभ्यास गर्नको लागी कती समय चाहिन्छ ?
स.कु.यो.का केहि महत्वपुर्ण विधी बुझ्न को लागी र आवश्यक स्त सम्मको कुन्डलिनी जागृती गर्न को लागी कारीब एक हप्ताको समय चाहिन्छ - दैनिक २ देखी ३ घन्टा को हिसाबले । यसको अभ्यास गर्नको लागी दिनहु ३० मिनेट जती समय चाहिन्छ ।
प्रश्न ८ सरलिकृत कुन्डलिनी योगको अभ्यास गरे पछी के फाइदा हुन्छ ? केहि अलौकिक शक्ती प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ?
स.कु.यो.को अभ्यास बाट मानसिक सुख शान्ती प्राप्त हुन्छ । मनको एकाग्रता बढ्छ । अलौकिक शक्ती प्राप्त भई नै हाल्छ भन्ने होईन ।
प्रश्न ९ सरलिकृत कुन्डलिनी योगको अभ्यास गर्नको लागी खानपानमा के के वर्जित गर्नु पर्दछ ?
स.कु.यो.को अभ्यास गर्नको लागी खानपान र रहनसहन मा कुनै प्रकारको वर्जना छैन ।
प्रश्न १० सरलिकृत कुन्डलिनी योगको अभ्यास गर्दा गृहस्थ जिवनको परित्याग गर्नु पर्छ ?
स.कु.यो.को अभ्यास गर्नकोलागी गृहस्थ जिवनको परित्याग गर्नु पर्दैन । न त ब्र्ह्मचर्य धर्मको पालन नै गर्नु पर्छ । खास कुरा त के हो भने यो योगको अभ्यासबाट गृहस्थ जिवन लगायत व्यवसायिक जिवन अझ उप्लब्धिपूर्ण हुने गर्दछ ।
प्रश्न ११ कुन्डलिनी योगबाट विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको सुनिन्छ । सरलिकृत कुन्डलिनी योगका नकारात्मक प्रभावहरु के के हुन् ?
स.कु.यो.को अभ्यास गर्दा कुनै प्रकारको नकारात्मक प्रभाव पर्दैन
प्रश्न १२ पहिले देखिनै विभिन्न खालका ध्यान विधिहरु प्रचलित छन् । फेरी सरलकृत कुन्डलिनी योग नै किन ?
यो सत्य हो कि हाम्रो समाज मा विभिन्न थरिका योगहरु प्रचलनमा छन् । सबैखाले योगहरुको आफ्नै प्रकृया हुन्छ । स. कु. यो. प्रविधिमा कुन्डलिनी शक्तिको रुपमा रहेको जिवन शक्तिको प्रत्यक्ष अनुभव र यसको परिचालन आफ्नो ईच्छा अनुसार गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न १३ नेपाली समाजले जानेको कुन्डलिनी योग र सरलिकृत कुन्डलिनी योगमा के फरक छ ?
हाम्रो समाजले बुझेको कुन्डलिनी योग धेरै समय लाग्ने, कठिन प्रकृया युक्त, जङल-पर्वतको वास, ब्रह्मचर्य जिवन, स्व:प्रयास, अलौकिक शक्तिको प्राप्ती वा भयावह शारिरिक-मानसिक रोग दिने खालको विषय बुझिन्छ ।
स.कु.यो. मा यि सबै कुराहरु हुँदैनन् । यसमा गुरुले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरी केहि मिनेटमै कुन्डलिनी शक्ती जागृत गराई दिन्छन् । दिक्षित व्यक्तिले आफ्नै घरमा दैनिक 20-30 मिनेट अभ्यास गरे पुग्छ । यसमा कुनै कर्मकान्ड गर्नु पर्दैन । खान-पिन रहन सहन सम्बन्धी कुनै वारबन्देज हुँदैन । न त कुनै प्रतिकुल प्रभाव नै पर्दछ ।